चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी २’ मा किन अनमोललाई ठाउँ छैन ? - Everest Dainik - News from Nepal
चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी २’ मा किन अनमोललाई ठाउँ छैन ?
‘मेरो एउटा साथी छ २’ मा अनमोललाई छैन ठाउँ
काठमाण्डौ, चैत १ । गतहप्ता आफू अभिनित नेपाली चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को सेलिब्रेटी शोमा अभिनेता अनमोल केसीले सुपरहिट फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ’ को सिक्वेलमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ भए आँखा चिम्लिएर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
प्रि–प्रोडक्सनमा रहेको चलचित्र खेल्न ‘ग्रिन सिग्नल’ देखाए लगत्तै उनलाई निर्माण टिमबाट ‘मेरो एउटा साथी छ २’ का लागि अफर गरिएको खबर सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको छ । तर, निर्देशक दिनेश राउतले यो कुराको खण्डन गरेका छन् । उनले बुधबार साँझ आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा स्टाटस कोर्दै अहिलेसम्म चलचित्रका लागि कुनै कलाकारलाई अफर र फाइनल नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिले निर्माणको सुरुवाती चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले हाल स्क्रिप्टमा काम भइरहेको बताए ।
उनले कुराकानी गर्दै फिल्मका लागि आफू र निर्माताबाट अनमोललाई फिल्म अफर नै नगरेको दाबी गरे । ‘अब हामीले नै फिल्म अफर गरेका छैनौं भने अरुले कसले गर्‍यो त्यो थाहा भएन । टिमभित्र अनमोललाई लिने कुरा समेत भएको छैन । र, एउटा कुरा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने फिल्ममा कुनै हालतमा अनमोल हुने छैनन्’ दिनेशले भने ।
यो फिल्मको पहिलो पार्टमा अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ प्रमुख भूमिकामा थिए । फिल्मलाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका थिए । निर्देशक थापालाई ुप्रसादु निर्देशक राउतले रिप्लेस गरेका छन् भने आर्यन र नम्रता दुबै दोहोरिने सम्भावना न्यून छ । खबरअनुसार, ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ फेम्ड अभिनेता धिरज मगर फिल्ममा हुने प्रवल सम्भावना छ ।
याे पनि पढ्नुस क्यालिफोर्नियामा चलचित्र ‘चि मुसि चि’को सुरुवात उत्साहजनक